Mogadishu Journal » Xarrakada Al-shabaab oo degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe meel fagaaro ah ku dishay sarkaal horay uga tirsanaa
Mjournal : — Wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya in xarrakada Al-shabaab meel fagaaro ah ku toogeen sarkaal horay uga tirsanaa kooxda Al-shabaab, kaa oo sida ay sheegeen ku biiray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Wararku waxaa ay sheegayaan in sarkaalka toogashada lagu dillay oo lagu magacaabi jiray Axmed Garaad Cali waxaa la sheegay in uu horay u soo noqday taliyihii Al-Shabaab degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabellaha Hoose, hase ahaatee mar dambe ku biiray dowladda Soomaaliya.
Horjooge u hadllay Al-shabaab oo fagaaraha toogashada ka hadllay ayaa sheegay in shaqsigan ay toogashada ku fuliyeen uu bilaabay in uu dacaayad ka fidiyo sida uuu hadalka u dhigay mujaahidiinta, islamarkaana ku biiran dowladda federaalka Soomaaliya.
Axmed Garaad oo ahaa 29 sano jir, waxaa toogashadiisa fuliyay xoogag ka tirsan Al-shabaab oo si gaar ah loogu diyaariyay, waxaana fagaaraha lagu tooganayay ay ka soo qeyb galeen dadweyne fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmada Jilib, waxaana xukunkan goob joog ka ahaa Saraakiil ka tirsan Shabaab.
Toogashadan ma’aha tii ugu horeysay oo ay fuliyaan, iyaga oo dhowr jeer oo hore deegaanada ay ka taliyaan ka fuliyeen xukuno dil ah oo isugu jiray dad lagu eedeeyay inay basaas ahaayeen kuwo dilal geystay oo maxkamad xukuntay.